Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Afghanistan » May ao: May be ny afo ao amin'ny seranam-piaramanidina Kabul
Tsy dia fantatra loatra ny hamafin'ny afo na ny niandohany, fa ny horonan-tsary navoaka tao amin'ny media sosialy dia mampiseho setroka setroka miakatra avy eny amin'ny seranam-piaramanidina, izay ivon'ny ezak'i Etazonia sy Andrefana tamin'ny herinandro lasa.
Notaterina tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Hamid Karzai ny afo.
Setroky ny rahona matevina miakatra ambonin'ny seranam-piaramanidina.
Mbola marefo ny fandriam-pahalemana eo amin'ny seranam-piaramanidina.
Toa nirongatra ny afo tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Kabul Hamid Karzai any Afghanistan, tao anatin'ireo famindra toerana feno korontana niaraka tamina olona an'arivony maro namoy fo hivoaka ny firenena.
Ny vaovao momba ny haintrano dia nipoaka ny alatsinainy hariva teo an-toerana. Tsy dia fantatra loatra ny hamafin'ny afo na ny niandohany, fa ny horonan-tsary navoaka tao amin'ny media sosialy dia mampiseho setroka setroka miakatra avy eny amin'ny seranam-piaramanidina, izay ivon'ny ezak'i Etazonia sy Andrefana tamin'ny herinandro lasa.
Mbola marefo ny fandriam-pahalemana eny amin'ny seranam-piaramanidina, miaraka amin'ny tafika amerikana sy miaramila mpiady miasa hamindra ny sivily an'arivony sy ny mpitsoa-ponenana afgàna avy any Kabul. Ora vitsy talohan'ny nitrangan'ny afo dia niditra tamina ady mitam-piadiana ireo miaramila amerikana sy alemanina niaraka tamin'ireo mpanafika tsy fantatra, tamin'ny fifanakalozana afo nahafaty miaramila Afghanistan iray. Farafahakeliny olona 20 no maty tao amin'ny seranam-piaramanidina nandritra ny herinandro lasa izay, hoy ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny OTAN.
Tsy mazava amin'ny ora anoratanay raha misy fiatraikany amin'ny sidina mankany sy avy amin'ny seranam-piaramanidina ny afo. Niala tsy nijanona ny seranam-piaramanidina ny sidina ny faran'ny herinandro, ary nilaza ny fitondrana Biden fa namindra olona manodidina ny 11,000 tao anatin'ny 36 ora. Na izany aza, an'arivony hafa no tavela ao Kabul, ary ny mety hisian'ny fihaonan'ny Etazonia sy ireo mpiara-dia aminy ny fe-potoana 31 aogositra ho an'ny fisintahana tanteraka dia izao no resahina.
Ny Taliban, izay naka fahefana tany Afghanistan herinandro mahery lasa izay, dia nampitandrina ny amin'ny "vokany" raha tsy feno ny fe-potoana.